Extremist Bengali terrorists launch series of attacks on police stations and police outposts in Maungtaw Township
NAY PYI TAW, 25 AUGUST
A police station was attacked with an improvised explosive device and Bengali terrorists started launching attacks on police outposts and police stations in Maungtaw District simultaneously.
All the incidents taken place are as follows:
(1) At 4:30 am, an unidentified number of Bengali terrorists attacked Tamantha police outpost in Region-2.
(2) At 3:35 am, they attacked Nantthataung police outpost in Region-3, leavingapolice constable identified as Nyi Nyi Lwin dead and one terrorist dead.
(3) At 3:45 am, about 100 Bengali terrorists attacked Thinbawgwe police outpost in Region-3, leaving one terrorist dead.
(4) At 5:25 am, an unidentified number of Bengali terrorists came and attacked Kyigyun police outpost in Region-3, leaving five policemen including camp commander injured. The terrorists retreated at 5:50 am.
(5) At 4:20 am, an unidentified number of Bengali terrorists attacked Meetaik-Chaungwa outpost in region-3. In the incident, police corporal Ye Myint, lance-corporal Thet Naing Tun died of sword wounds and three arms taken. The terrorists retreated at 4:45 am.
(6) At 3:35 am, unidentified number of Bengali terrorists attacked Natchaung outpost in Region-4.
(7) At 4:30 am, about 150 Bengali terrorists attacked Zeepinchaung outpost. In the incident, police constable Min Thura Naing died of sword injuries and one walkie-talkie and one arm were taken.
(8) At 3:25 am, Bengali terrorists attacked Laungdon outpost in Region-5 where they were repulsed by the policemen.
(9) At 1 am, Bengali terrorists attacked Maungni outpost in Region-6.
(10) At 4:05am, about 100 Bengali terrorists attacked Thiho outpost in Region-6 where they were met withapolice repulse, prompting the terrorists to retreat inaminute.
(11) At 4:10 am, an unidentified number of Bengali terrorists attacked Zinpaingnyar outpost in Region-6 where they were met withapolice repulse, prompting the terrorists to retreat at 4:35am.
(12) At 7:35 am, an unidentified number of Bengali terrorists attacked Kyaukpyinseik outpost in Region-6.
(13) At 00:50 am, an unidentified number of Bengali terrorists attacked Padingaung Takar outpost in Region-7.
(14) At 1:20 am, an unidentified number of Bengali terrorists attacked Panyaungbingyi outpost in Region-7 where were met withapolice repulse.
(15) It was learnt thatamob encircled Shweyinaye outpost in Region-7 at4am.
(16) According to information that about 100 Bengali terrorists approached Thayay Konbaung outpost in Region-7 at 5:15 am, men and arms were moved to the village.
(17) At4am, an unidentified number of Bengali terrorists attacked Cheinkhali outpost in Region-8 where they were met withapolice repulse, leaving one terrorist dead.
(18) At 4:45 am, about 1000 Bengali terrorists attacked Myinlut police station in Region-8, leaving Police Major Hein Htet Kyaw and police constable Win Htike dead and one BA-94 and one .38 revolver taken.
(19) At 4:50 am, an unidentified number of Bengali terrorists attacked Ale Thankyaw police station in Region-8, leaving Deputy Township Immigration Officer Zar Moung dead. The policemen repulsed the terrorists who retreated from the scene.
(20) At 5:10 am, about 100 Bengali terrorists attacked Udaung (Natala) outpost in Region-8 where they were met withapolice repulse, prompting them to retreat at6am.
(21) At 7:25 am, an unidentified number of Bengali terrorists attacked Hnakhaungto-Chaungwa outpost in Region-8.
(22) At 4:50 am, about 100 Bengali terrorists attacked Thawunchaung outpost in Region-9.
(23) At 4:50 am, an unidentified number of Bengali terrorists attacked Koetankauk police station in Region-9. The military columns arrived at the scene at 5:15 am and returned fires, leaving six terrorists dead.
(24) At 3:40 am, 10 Bengali terrorists attacked Taung Bazaar outpost in Region-10 where they were met withapolice repulse, leaving five terrorists dead. The terrorists retreated at 5:15 am.
(25) At 4:25 am, an unidentified number of Bengali terrorists launched an attack on Phaungtawpyin police outpost in Region-10, leaving Police Sub-inspector Aung Myint Oo and police lance-corporal Soe Win dead. Two terrorists died by the police repulse.
Police stations and police outposts nearby Maungtaw being attacked by Bengali terrorists are as follows:
(1) At 3:30 am, Bengali terrorists attackedapolice outpost in Ward-5 with hand grenades. At 3:35 am,amob of Bengali terrorists encircled the police outpost where they were met with police fires.
(2) At 3:30 am, five Bengali terrorists attacked Ywathitkay outpost with hand grenades.
(3) At 3:30 am, five Bengali terrorists attackedapolice outpost at the entrance to Maungtaw with arms.
(4) At 3:30 am, Bengali terrorists attacked Natala police outposts and they were repulsed by the police.
(5) At 3:30 am, Bengali terrorists attackedatraffic police office and anti-drug squad office with hand-made bombs.
(6) At 8:5 am, Bengali terrorists blew outasmall old-concrete bridge near Kyaukpandu Village.
Altogether 8 police officers and one deputy township immigration officer totaling9died and six small arms and one walkie-talkie taken in the incidents while 16 extremist Bengali terrorists were found dead. A combined force of the Tatmadaw and border guard police is launching area clearance operations in Maungtaw Region.
It can be concluded that those terrorists launched organized attacks in synchronization with the issue of final report by the Advisory Commission on Rakhine State led by Kofi Annan and UN General Assembly to be held from 12 to 25 September 2017.
Further information will be released soon.—State Counsellor Office Information Committee
Posted by မောင်သုတ2comments
Bengali Terrorists in Rakhine State
Many police outposts and police stations in Maungtaw attacked by Bengali extremist terrorists
Police outposts and police stations in Maungtaw District were attacked by Bengali terrorists at 1 am yesterday, leaving five policemen dead and seven bodies of the extremist terrorists were found at the scene.
The police outposts and police stations being attacked are Natchaung, Tamantha, Kuntheepin-Chaungwa, Nantthataung, Nantthataung-Chaungwa, Meetaik-Chaungwa, Kyeekyun, Zeepin-chaungwa, Laungdon, Thihokyun, Zinpaingnyar, Tharaykonboung, Panyaungbingyi, Shweyinaye, Myinlut, Alethankyaw, Udaung (Natala), Taung Bazzar, Phaungtawpyin and Maungtaw (Natala). Similarly, at about3am, about 150 terrorists divided themselve into two groups and were attempting to enter No (552) Light Infantry Regiment where they were driven out by the Tatmadaw members.
According to initial information, five policemen were dead with two arms taken and seven bodies of the extremist terrorists were recovered so far.
Up to now, fighting remains in some locations andacombined forces of the Tatmadaw and police forces are still waging an attack against the extremist
The terrorist attack are being carried out in synchronization with the issue of final report by Advisory Commission on Rakhine State led by Dr. Kofi Annan. Detailed information will be released soon.
သိပ်တန်ဖိုးရှိတဲ့ ပို့စ်လေးပါ မာန်နတ်ဆိုတာ အခုမှ စုံစုံလင်လင် သိခွင့်ရတာအကျိုးများ၏။
၃-ဘိက္ခုနီသာသနာကိုကျတော့ ဘာလို့ မနှောက်ယှက်ခဲ့တာလဲ ??
၄-ဘုရားကို ပရိနိဗ္ဗာန်စံခိုင်းတာ မာရ်နတ်အကြီးမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတယ်၊
၅-မာရ်နတ် ခိုင်းလို့ ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတာလား၊ ဝက်သားစားလို့လား ??
၇-မာရ်နတ်ကို နှောင့်ယှက်လို့မရအောင် ဘုရားကဘာလို့ တန်ခိုးနဲ့ မတားလဲ ??
၈-ရှင်ဥပဂုတ်ကမာရ်နတ်ကို ဆုံးမတယ်ဆိုတာ ဟုတ်လား ??
မာရ်ရဲ့အကြောင်းလေး အရင်ရှင်းရအောင် မာရ်ဆိုတာ မာရဆိုတဲ့ ပါဠိကနေလာတာ မာရဆိုတာ သေခြင်း၊ သေစေခြင်းလို့ အဓိပ္ပါယ်ရတယ်။
မာရ်ဆိုတာ သေတတ်တဲ့သဘော သေအောင်သတ်တတ်တဲ့သဘောကိုပြောတာ။
☆☆မာရ် (၅)ပါးကို အကျဉ်းလေး ပြောပြမယ်။
☆ ကိလေသမာရ် ဆိုတာ တစ်ထောင့်ငါးရာကိလေသာတွေကိုပြောတာ လောဘ၊ ဒေါသ၊ ဣဿာ၊ မစ္ဆရိယ အစရှိတဲ့ ကိလေသာတွေဟာ စိတ်ကို ပူလောင်စေတတ်တယ်၊ ညစ်နွမ်းစေတတ်တယ်၊ ပင်ပန်းဆင်းရဲအောင် နှိပ်စက်တတ်တယ်။
ဒီကိလေသာတွေ ရှိနေသရွေ့ကတော့ သံသရာမှာ တလည်လည်နဲ့ အမြဲသေနေဦးမှာပဲ။
ဒီလိုသေစေတတ်လို့ ကိလေသာကို မာရ်လို့ခေါ်တယ်။
☆ ခန္ဓမာရ် ဆိုတာ ဒီခန္ဓာ ၅ပါးကို ပြောတာပဲ။ ခန္ဓာရှိသရွေ့ သေနေဦးမှာပဲ။
သေတတ်လို့ ခန္ဓာ ၅ပါးကို မာရ်လို့ခေါ်တယ်။
☆ မစ္စုမာရ် ဆိုတာ သေခြင်းတရားပါပဲ။ မရဏကိုပြောတာပေါ့။
သေတတ်တဲ့ မစ္စုကို မာရ်လို့ခေါ်တယ်။
☆ အဘိသခါင်္မာရ် ဆိုတာ ကိုယ်ပြုထားတဲ့ ကုသိုလ်ကံ၊ အကုသိုလ်ကံတွေကိုပြောတာ။
ကုသိုလ်ကံကြောင့် ကောင်းတဲ့ဘဝရောက်မယ်။ အကုသိုလ်ကံကြောင့် မကောင်းတဲ့ဘဝ ရောက်မယ်။ ဘယ်ဘဝရောက်ရောက် သေမှာပဲ။
သေစေတတ်လို့ အဘိသခါင်္ကို မာရ်လို့ ခေါ်တယ်။
☆ ဒေဝပုတ္တ မာရ်ဆိုတာ မာရ်နတ်ကို ပြောတာ။
မာရ်နတ်ဟာ သတ္တဝါတွေ သံသရာဝဋ်က လွတ်မှာကြောက်တယ်။
၃၁ဘုံ ဘယ်ကိုသွားသွား သူသဘောကျတယ်။
လွတ်ထွက်သွားမှာကြောက်လို့ လွတ်ကြောင်းလုပ်ရင် နှောင့်ယှက်တယ်။
မာရ်နတ် အနှောင့်အယှက် ခံရရင် သံသရာလွတ်ကြောင်း မလုပ်ဖြစ်တော့ဘူး။
၃၁ဘုံမှာပဲ ပျော်မွေ့တော့တယ်။ ဘယ်ဘုံဖြစ်ဖြစ် သေမှာပဲ။
ဒီလိုသေစေတတ်လို့ ဒေဝပုတ္တမာရ်နတ်ဟာလည်း မာရ်ပါပဲ။
ဒီတော့ မာရ်ငါးပါးဆိုတာကမာရ်နတ် ငါးပါးကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။
မာရ်နတ်ကလည်း ငါးယောက်မက ရှိနေနိုင်ပါတယ်။
ဘုရားနဲ့သံဃာတွေကို နှောင့်ယှက်တဲ့ မာရ်နတ်ကတော့ သူတစ်ယောက်တည်းပါပဲ။
၁ ရဲ့အဖြေ ပြီးပါပြီ။
မာရ်နတ်ဟာ နတ်ပြည် ၆ထပ်မှာ အထက်ဆုံး နတ်ဘုံမှာနေတယ်။
နတ်ပြည် ၆ထပ်ရဲ့ စည်းစိမ်နဲ့ သက်တမ်းလေး နည်းနည်းပြောပြမယ်။
☆စတုမဟာရာဇ်နတ်ပြည်ဆိုတာ မြင်းမိုရ်တောင်ရဲ့ အလယ်မှာရှိတယ်။
ဓတရဋ္ဌ၊ ဝိရုဠှက၊ ဝိရူပက္ခ၊ ကုဝေရဆိုတဲ့ နတ်မင်းကြီး လေးပါးက အုပ်ချုပ်တယ်။
သက်တမ်းက နှစ်ပေါင်း ၅၀၀ ရှိတယ်။
လူသက်နဲ့ဆို အနှစ် ၉သန်းရှိတယ်။
☆တာဝတိံသာ သူ့ထက်ပိုပြီးမြင့်တယ်။ မြင်းမိုရ်တောင်ထိပ်မှာ ရှိတယ်။
သိကြားမင်း ဦးမဃနဲ့တကွ ၃၃ယောက်သောနတ်မင်းကြီးတို့ အုပ်စိုးတယ်။
အခေါင်နတ်မင်းကတော့ ဦးမဃပဲ။ (မာဃမဟုတ် မဃသာအမှန်)
တခြားနတ်မင်းတွေလည်းရှိတယ်။ နတ်သားတစ်ယောက်တောင်မှ နတ်သမီးအခြွေအရံ
၅၀၀ ခြံရံပြီး ကာမဂုဏ်ချမ်းသာကို ခံစားတယ်။
သက်တမ်းက နှစ်၁၀၀၀ လူလိုတွက်ရင် ၃ကုဋေ၆သန်းရှိတယ်။
☆ယာမာကနေစပြီး ဘုံဗိမာန်တွေဟာ ကောင်းကင်ယံမှာတည်တယ်။
သက်တမ်းက နှစ် ၂၀၀၀ လူလိုတွက်ရင် ၁၄ကုဋေ၄သန်းရှိတယ်။
နတ်ဘုံတိုင်းမှာ ကိုယ့် နတ်မင်းကြီးနဲ့ကိုယ်ရှိတယ်။
ယာမာ နတ်ပြည်အတွက်တော့ သုယာမနတ်မင်းက အခေါင်နတ်မင်းကြီးပဲ။
ဘုရားလောင်းနဲ့ မယ်တော်ဟောင်းတွေဒီဘုံမှာ လာဖြစ်ကြတယ်။
သက်တမ်းက နှစ် ၄၀၀၀ လူလိုဆို ၅၇ကုဋေ၆သန်းရှိတယ်။
☆နိမ္မာနရတိနတ်ပြည်ဆိုတာ ကိုယ့်စည်းစိမ်ကိုယ်စိတ်ကြိုက် ဖန်တီးလို့ရတယ်။
အောက်ကနတ်ပြည်တွေက ကိုယ့်ကုသိုလ်ကံအလိုက် ဘုံဗိမာန် အစရှိသဖြင့် ရတယ်။
ဒီနတ်ပြည်ကတော့ စိတ်ကြိုက် ဖန်တီးပြီး ခံစားလို့ရတယ်။
သက်တမ်းက နှစ် ၈၀၀၀ လူလိုဆို ၂၃၀ကုဋေ၄သန်းရှိတယ်။
ကျောင်းတကာမကြီး ဝိသာခါ သေတော့ ဒီဘုံကို ရောက်တယ်။
☆ပရနိမ္မိတဝဿဝတီနတ်ပြည်က နတ်ပြည် ၆ထပ်မှာ အမြင့်ဆုံးပဲ။
သူတို့က လိုတာထက်ပိုပြီး ခံစားချင်ရင်တောင် သူများဖန်ဆင်းပေးရတယ်။
သက်တမ်းက နှစ်ပေါင်း ၁၆၀၀၀ လူလို ၉၂၁သန်းအထိ ရှည်ကြာတယ်။
မာရ်နတ်က ဒီဘုံမှာနေတယ်။ အခေါင်နတ်မင်းကြီးတော့ မဟုတ်ဘူး။
မာရ်နတ်သားပဲ။ အခေါင်နတ်မင်းကြီးက ဝဿဝတီနတ်မင်းကြီး သပ်သပ်ရှိတယ်။
မာရ်နတ်ကို စင်ပြိုင်လို့တော့ သတ်မှတ်လို့ရတယ်။ သူ့တပည့်တွေက များတာကိုး။
မာရ်နတ်က ပုံထဲကလို ရုပ်ဆိုးဆိုးမဟုတ်ပါဘူး။
ကာမာဝစရနတ်ပြည် ၆ထပ်မှာ အချောအလှဆုံးနတ်တွေထဲက တစ်ပါးပါ။
အားကြီးတဲ့ ကုသိုလ်ကံတွေ ပြုခဲ့ဖူးသူပါ။
ဒီလောက်ဆို မာရ်နတ်က သိကြားမင်းကို ဘာလို့ သွားပြီး မတိုက်ခိုက် မသိမ်းပိုက်သလဲ
၂ ရဲ့အဖြေပြီးပါပြီမာရ်နတ်ဆိုတာ သံသရာလွတ်ကြောင်းကလွဲရင် ဘာလုပ်လုပ် အမြဲအကောင်းမြင်တယ်။
သံသရာလွတ်ကြောင်း လုပ်လို့ကတော့ နည်းမျိုးစုံနဲ့တားတယ်။
သိဒ္ဓတ္ထမင်းသား တောထွက်ချိန်မှာလည်း တားခဲ့တယ်။
ဘုရားဖြစ်ကာနီးချိန်မှာလည်း လေကြီးမိုးကြီး ပြာပူမီးနဲ့ မှောင်ကြီးတစ်တန်
ဓားလှံမကြွင်း ပစ်ခတ်ခွင်းပြီး နှောင့်ယှက်တယ်။
ဘေးနားမှာရှိနေတဲ့ ဘုရားဖြစ်တာနဲ့ ကြိုဆိုမယ့်သူတွေ
သိကြားမင်းက ခရုသင်း၊ ဗြဟ္မာမင်းက ထီးဖြူ၊ ပဉ္စသိင်္ခနတ်မင်းက ဗေလုဝစောင်း။
ကိုယ့်ပစ္စည်း ဘယ်နားကျန်မှန်းတောင်မသိအောင် ထွက်ပြေးကြတယ်။
(တကယ်တော့ ဗေလုဝစောင်းက မာရ်နတ်ရဲ့အပိုင် ဘုရားလောင်း ၆နှစ်လုံးလုံး
အပြစ်လုပ်ရင်ထောက်ပြပြီး ပျော်ပျော်ပါးပါးတီးဖို့ ဂျိုင်းကြားညှပ်လာတာ။
၆နှစ်လုံး အပြစ်တစ်ချက်မှ မရှိတဲ့ ဘုရားလောင်းကို စိတ်ပျက်လက်ပျက်
စောင့်ကြည့်ရင်းက ထွက်ကျနေခဲ့တာ။ ဒါကိုသိကြားမင်းက ကောက်ပြီး ပဉ္စသိင်္ခနတ်မင်းကို
^^^ဒီနေရာမှာက ကျမ်းညှိစရာတွေများတာရယ် ပို့စ်နဲ့လည်းသိပ်မဆိုင်လို့ဒီလောက်ပါပဲ)
သမီးတော် သုံးယောက်ရဲ့ အလှအပ၊ အတွေ့အထိ၊ အမွှေးနံ့သာ၊ အရက်သေစာ
အရုဏ်တက်ချိန်မှာပဲ အရဟတ္တဖိုလ်အထွတ်တပ်တဲ့ အာသဝေါတရားတို့ အမြစ်မကျန်
ဖယ်ရှားပြီး သဗ္ဗညုတဉာဏ်ကို ရသွားတယ်။
ဒီတော့ သတ္တသတ္တာဟ ၄၉ရက်ရဲ့ အလွန် အဋ္ဌမသတ္တာဟ အဇပါလညောင်ပင်ကို
ဘုရားနောက်တဖန် ပြန်ရောက်ချိန်မှာ မာရ်နတ်က အချိုသပ်နဲ့ လာတောင်းပန်တယ်။
အရှင်ဘုရားအနေနဲ့ အရဟတ္တဖိုလ်လည်း တိုင်ပါပြီဘုရား။
အရှင်ဘုရား ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုပါတော့လို့ လာတောင်းပန်တယ်။
ငါဘုရားမှာ ဘိက္ခု၊ ဘိက္ခုနီ၊ ဥပါသကာ၊ ဥပါသိကာ ပရိသတ်
- သူတပါးကို မဟောပြောနိုင်သေးဘူးဆိုလျှင်
- ဆန့်ကျင်ဘက်လာပြောလို့မှ မနှိမ်နင်းနိုင်သေးဘူးဆိုလျှင်
ကြားကာလတွေမှာ ကြုံရင်ကြုံသလို နှောင့်ယှက်တယ်။
ဘုရားက မာရ်နတ်အပေါ်မှာရော ကျန်သတ္တဝါတွေအပေါ်မှာရော မေတ္တာထားတယ်။
အနှောင့်အယှက်တွေကို ဂရုမစိုက်ပဲ ဆက်လက် တရားပြတယ်။
သတ္တဝါတွေအပေါ်မှာ ကရုဏာထားပြီး တရားပြတယ်။
မာရ်နတ်နှောင့်ယှက်သမျှကို ဥပေက္ခာနဲ့ ခွင့်လွှတ်ပေးခဲ့တယ်။
(မာရ်နတ် မနှောင့်ယှက်နိုင်အောင် ချုပ်ထားတာပဲ ဖြစ်ဖြစ်
မလုပ်ရခြင်းအကြောင်း နောက်မှ ထင်ရှားပါလိမ့်မယ်)
ဘိက္ခုနီသာသနာအတွက် မိထွေးတော်ဂေါတမီတို့ ကြိုးစားနေချိန်မှာ
ပရိသတ် ၄ပါးစုံမယ်။ ဒီပရိသတ်လေးပါးစုံပြီးမှ ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ပြုမှာမို့
၃ ရဲ့ အဖြေပြီးပါပြီ
ပရိနိဗ္ဗာန်မပြုခင် ၃လ အလိုမှာ တစ်ခါလာတောင်းပန်တယ်။
ငါဘုရားမှာ ဘိက္ခု၊ ဘိက္ခုနီ၊ ဥပါသကာ၊ ဥပါသိကာ ပရိသတ် လေးပါးတို့က
- ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မဆောင်ရွက်နိုင်ကြသေးဘူးဆိုလျှင်
ပရိသတ်လေးပါးမှာ ဘိက္ခုပရိသတ်သည် ဗုဒ္ဓတရားတော်ကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆောင်ရွက်မှတ်သား၍ သူတပါးတို့ကိုလည်း ဟောပြောနိုင်ပါပြီ။ ဆန့်ကျင်ဘက်ပြောလာသူတို့ကိုလည်း တရားသဖြင့်နှိမ်နင်းပြီး အကျိုးအကြောင်းနှင့်တကွ တရားကို ဟောပြနိုင်ပါပြီ
ပရိနိဗ္ဗာန်စံယူရန် အချိန်အခါ သင့်ပါပြီ။ ပရိနိဗ္ဗာန် စံတော်မူပါတော့ဘုရား။
ဘိက္ခုနီပရိသတ်သည် ဗုဒ္ဓတရားတော်ကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆောင်ရွက်မှတ်သား၍ သူတပါးတို့ကိုလည်း ဟောပြောနိုင်ပါပြီ။ ဆန့်ကျင်ဘက်ပြောလာသူတို့ကိုလည်း တရားသဖြင့်နှိမ်နင်းပြီး အကျိုးအကြောင်းနှင့်တကွ တရားကို ဟောပြနိုင်ပါပြီ
ပရိနိဗ္ဗာန်စံယူရန် အချိန်အခါ သင့်ပါပြီ။ ပရိနိဗ္ဗာန်
စံတော်မူပါတော့ဘုရား။ဥပါသကာပရိသတ်သည် ဗုဒ္ဓတရားတော်ကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆောင်ရွက်မှတ်သား၍ သူတပါးတို့ကိုလည်း ဟောပြောနိုင်ပါပြီ။ ဆန့်ကျင်ဘက်ပြောလာသူတို့ကိုလည်း တရားသဖြင့်နှိမ်နင်းပြီး အကျိုးအကြောင်းနှင့်တကွ တရားကို ဟောပြနိုင်ပါပြီ
ပရိနိဗ္ဗာန်စံယူရန် အချိန်အခါ သင့်ပါပြီ။
ဥပါသိကာပရိသတ်သည် ဗုဒ္ဓတရားတော်ကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆောင်ရွက်မှတ်သား၍ သူတပါးတို့ကိုလည်း
ဟောပြောနိုင်ပါပြီ။ ဆန့်ကျင်ဘက်ပြောလာသူတို့ကိုလည်း တရားသဖြင့်နှိမ်နင်းပြီး အကျိုးအကြောင်းနှင့်တကွ တရားကို
ဟောပြနိုင်ပါပြီပရိနိဗ္ဗာန်စံယူရန် အချိန်အခါ သင့်ပါပြီ။
ဒီလိုမျိုး ပြည်စုံပုံပြပြီး ပရိနိဗ္ဗာန်စံဖို့ လျှောက်တယ်။
ဒီတော့ ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံဖို့ လာလျှောက်တာ ဒီမာရ်နတ်ပါပဲ။
ဒီအချိန်မှာ ဘုရားရဲ့သက်တော်ဟာ ၈၀အတွင်းကို
ချဉ်းနင်းဝင်ရောက်နေပြီ။၈၀ ပြည့်ဖို့ ၃လပဲ လိုတော့တယ်။ ဘုရားရှင်တိုင်းဟာ သက်တမ်းရဲ့ ၅ပုံ ၄ပုံမှာပဲ ပရိနိဗ္ဗာန်စံလေ့ရှိတယ်။
ဘုရားရှင်ရဲ့ ပစ္ဆိမသာဝကဖြစ်တဲ့ သုဘဒ္ဒပရဗိုဇ်ကလည်းနောက်သုံးလနေမှ ဉာဏ်ရင့်မယ်။တရားဟောလို့ရမယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ ၇လတုန်းက
သေလောက်တဲ့ သွေးဝမ်းသွန်ရောဂါကို အာယုပါလကဖလသမာပတ်နဲ့
၁၀ လတာထိန်းတာကလည်း နောက်သုံးလဆို ပြည့်ပြီ။
ပရိနိဗ္ဗာန်စံယူလောက်အောင် ပြင်းထန်တဲ့ သွေးဝမ်းသွန်ရောဂါဟာလည်း ပြန်ပေါ်တော့မယ်။
ပြန်ပေါ်လာတဲ့ ရောဂါကို အာယုပါလကဖလသမာပတ်နဲ့ ပြန်ထိန်းချင်လည်းရတယ်။မထိန်းတော့ပဲ အနုပါဒိသေသ ပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်စံလိုက်လည်းရတယ်။
အရင်က ဖလသမာပတ်သုံးပြီး ရောဂါကိုထိန်းတာဟာ ပစ္ဆိမသာဝကကို
တရားဟောဖို့ မမီမှာစိုးလို့။ အခုကပစ္ဆိမသာဝကကိုတရားဟောမီတဲ့အတွက် မထိန်းတော့ဘူး ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော့မယ်။ဒီတော့ ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံတာ မာရ်နတ်ကြောင့်လည်း မဟုတ်ဘူး သူကရမဒ္ဒဝကြောင့်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။
(သူကရမဒ္ဒဝကို ဝက်သားမဟုတ်ကြောင်း ကျမ်းများစွာတို့မှာ
ရှင်းလင်းထားတာတွေ့ရပါတယ်။ ပို့စ်နဲ့မဆိုင်လို့ မရေးတော့ပါဘူး)
မာရ်နတ်ကလည်း လာလာနှောင့်ယှက်နေတာ ဒီတစ်ယောက်တည်းပါ။
ပရိနိဗ္ဗာန်မစံခင် ၁၀လ အလို (အာယုသခါင်္ရမလွှတ်ခင် ၇လ အလို) ကတည်းကပရိနိဗ္ဗာန်စံစရာ ရောဂါဝေဒနာ သွေးဝမ်းသွန်မှု ဖြစ်နေပြီးဖြစ်ပါတယ်။အချိန်တန်ပြီမို့ ပရိနိဗ္ဗာန်စံကြောင်း သိလောက်ပါပြီ။
၄နဲ့ ၅ ရဲ့ အဖြေ ပြီးပါပြီ
အကယ်၍သာ သူကရမဒ္ဒဝကို ကြိုတင်မှီဝဲထားခြင်းမရှိရင်
သူကရမဒ္ဒဝကို သုံးဆောင်မိလို့ အာဟာရရှိပြီး နေနိုင်တာကို သူကရမဒ္ဒဝကြောင့်သွေးဝမ်းသွန်တယ်ထင်ရင်တော့ မှားပါလိမ့်မယ်။
ဒီသူကရမဒ္ဒဝဟာ ဘုရားမဖြစ်ခင် အာဟာရဖြည့်တင်းတဲ့ သုဇာတာရဲ့ဃနာနို့ဆွမ်းလိုပဲအကျိုးကျေးဇူးကြီးမားကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ ]]
ဒီတော့ အကြောင်းစုံညီနေပြီဖြစ်တဲ့နောက် ၃လကို ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံတော့မှာဖြစ်လို့မာရ်နတ်က ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုဖို့ လာလျှောက်ချိန်မှာ ဘုရားက -မာရ်နတ်ရေ ငါဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ပြုမယ့်
နောက် ၃လနေရင် ငါဘုရား ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတော့မယ်။
ဒီလိုပြောပြီး အာယုသခါင်္ရကိုလွှတ်လိုက်ပါတော့တယ်။
ဒီလို အာယုသခါင်္ရကို လွှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ ကြောက်စရာကောင်းကြက်သီးမွေးညှင်း
မိုးတွေချုန်း လျှပ်စီးတွေ လက်တယ်။
မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်တိုင်တော့ ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုဖို့ နီးကပ်ပြီမို့
နှစ်သက် ဝမ်းမြောက်တဲ့ ပီတိနဲ့ ဥဒါန်းကျူးတော်မူပါသေးတယ်။
#လင်္ကာ ။ ။ မုနိ ထွဋ်တင် ဘုရားရှင်သည် များဖြင်အချိုး အမျိုးမျိုးဟု ကောင်းဆိုးနှစ်ပြင် ပေးစွမ်းအင်ကို ချိန်ခွင်ပမာ ဉာဏ်ပညာဖြင့် ကောင်းစွာလှလှ ချိန်၍ရသည့် တုလမည်ငြား ကာမာဝစရကံ တရားကိုလည်းကောင်း ချိန်ခွင်ပမာ ဉာဏ်ပညာဖြင့် ကောင်စွာပိုင်ပိုင် မချိန်နိုင်မှု အကြောင်းပြု၍ အတုလမည်ငြား မဟဂ္ဂုတ်ကံတရားကိုလည်းကောင်း ။မဂ် အရဟတ္တ ရတုန်းကပင်
လုံးဝမငဲ့ စွန့်လွှတ်ခဲ့၍ တကယ့်စစ်ပွဲ နိုင်အောင်နွှဲသည့် သူရဲခေါင်အုပ် စစ်ဗိုလ်ချုပ်သည် ဖွဲ့တုပ် စစ်ဝတ် အားလုံးချွတ်သို့ ဝဋ်ကိလေသာ အဖြာဖြာကို ကောင်းစွာ ဖျက်ဆီး အားလုံးပြီးသည် .....
အေးကြီး အေးရပြီ တကား။
မြတ်စွာဘုရား ဥဒါန်းကျူးသလိုပဲ မာရ်နတ်ကလည်း ပျော်ပြီး
ထွက်သွားတယ်။ဒီ ၃လအတွင်းမှာ အရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့
ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး ပရိနိဗ္ဗာန်မပြုခင် အခါတပါးက
တစ်ကိုယ်တည်း နေနေတုန်း မာရ်နတ်က ဝမ်းထဲကို ဝင်ရောက်နှောင့်ယှက်တယ်။
မထေရ်မြတ်ဝမ်းက မသာမယာဖြစ်လာလို့ အစာအာဟာရကြောင့်လားဆိုပြီး
လမ်းထလျှောက်တယ်။ တန်ခိုးတော်နဲ့လည်း ကြည့်တယ်။
ဒီတော့မှ မာရ်နတ်ဝင်နေတာသိပြီး မာရ်နတ်ကို ထွက်ခိုင်းတယ်။
မာရ်နတ်က ငါ့ကိုမြင်သွားပြီဆိုပြီး ဝမ်းထဲက ထွက်လာရတယ်။
တန်ခိုးပြင်းထန် အရှင်မောဂ္ဂလာန်ရဲ့စကားကို အာခံဖို့လည်း မဖြစ်နိုင်ဘူး။
အရှင်မောဂ္ဂလာန်က မင်းကို ငါမြင်ရသေးတယ်လို့ပြောပြီး
ဒီမယ်မာရ်နတ် ငါလည်း အရင်ကမာရ်နတ်ဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်။
ငါ့ရဲ့နာမည်က အဲ့ဒီတုံးက ဒုဿီလို့ခေါ်တယ်။
အဲ့တုန်းက ငါ့နှမဟာ အခု မင်းအမေပဲ။
ဒီလိုပြောလိုက်တော့ မာရ်နတ် သူ့ဦးလေးမှန်းလည်းသိသွားရော
ဒီအချိန်မှာမှ မထေရ်မြတ်က ငါမာရ်နတ်ဖြစ်ခဲ့တုန်းကလည်း
ဘုရားနဲ့ သံဃာတွေကိုစော်ကားခဲ့လို့ စုတိပြတ်ကြွေသေလွန်တဲ့အခါ
အဝိစိငရဲကို ကျဆင်းခံခဲ့ရတယ်။ မင်းလည်း ဘုရားနဲ့ သံဃာတွေကို
သတ္တဝါတွေ သံသရာဝဋ်က မလွတ်အောင်သူကြိုးစားခဲ့တာတွေကို
နောင်တရပြီး အရှင်မောဂ္ဂလာန်ရဲ့တရားတိုတိုလေးနဲ့ မဂ်ဉာဏ်ဖိုလ်ဉာဏ်
သတ္တဝါတွေကိုပါ သံသရာဝဋ်က ခေါ်ထုတ်နိုင်တဲ့ သမ္မာသမ္ဗောဓိဆုကို ပန်ခဲ့တယ်။
ပြီးတော့သူနေတဲ့ ပရနိမ္မိတဝဿဝတီနတ်ပြည်ကို ပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။
ပါရမီပေါင်းများစွာဖြည့်ကျင့်ပြီး လောကသတ္တဝါတွေကို ဘုရားတစ်ဆူအနေနဲ့
၆ ရဲ့ အဖြေပြီးပါပြီ။
ဘာလို့တစ်ခုခု မလုပ်သလဲကို သိလောက်ပါပြီ။
သူ့ဦးလေးဟောင်းက ဆုံးမမှ ရမှာကြောင့်ကတစ်ကြောင်း
တန်ခိုးနဲ့ဆုံးမရင် မာစ်နတ်က မနိုင်မှန်းသိလည်း သူချကိုယ်ချကွာဆိုပြီး
ပြန်ချနေရင် အကျိုးယုတ်မှာ စိုးတာကြောင့်ကတစ်ကြောင်း
ဘုရားဆုပန်မယ့် ဆန္ဒဖြစ်ဦးမယ့် ဥပနိဿယကို မြင်တာက တစ်ကြောင့်
စတာတွေကြောင့် အစောပိုင်း နှောင့်ယှက်သမျှကို မေတ္တာ၊ ကရုဏာ၊ ဥပေက္ခာတွေနဲ့
၇ ရဲ့ အဖြေ ပြီးပါပြီ။
မာရ်နတ်ကိုအရှင်မောဂ္ဂလာန်ဆုံးမနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် အရှင်ဥပဂုတ်ဆုံးမတယ်ဆိုတာလုံးဝ မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။ နောက်တစ်ချက်က အရှင်ဥပဂုတ်ဆိုတာ
မဟာယာန အနွယ်ဝင် စိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ပါ။
၈ ရဲ့ အဖြေ ပြီးပါပြီတစ်ခါက စွန်းလွန်းဆရာတော်ကြီးကို ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုဖို့ နတ်တစ်ပါးက လာလျှောက်ဖူးတယ်။
အရှင်ဘုရား အာယုသခါင်္ရလွှတ်ပါတော့ ဘုရားတဲ့
ဆရာတော်ကြီးဘေးနားက တပည့်တွေက အဲ့ဒါမာရ်နတ်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောတော့
ဆရာတော်ကြီးက အဘိညာဉ်နဲ့ လိုက်ကြည့်ပြီးပြန်ပြောတယ်။
မာရ်နတ်ကြီးက လိမ္မာနေပါပြီကွာ တဲ့
ရေးသားပူဇော်သူ >> အကုသလပုတ္တ
နှလုံးသား အာဟာရမှ ကူးယူးဖော်ပြပါသည်။
မြတ်စွာဘုရားနှင့် သံဃာတော်များ မိဘ ဆရာ
ဤစာအားကျမ်းပြုစုသူအပေါင်းအများဖတ်ရှု့နိုင်စေရန် အဆင့်ဆင့် လက်ဆင့်ကမ်းသယ်ဆောင်ပေးသူများအားလုံးကိုစ
ျာန်ရဲ လက်ဆယ်ဖြာ ထိပ်မှာမိုး၍ရှစ်ခိုးကန်တော့ပါ၏
အစ္စရေး လူမျိုးလို့လည်း ခေါ်ကြပါတယ်။ ဂျူးလူမျိုးများဟာ ကမ္ဘာ့ရှေးအကျဆုံးသော လူမျိုးထဲမှာ ပါဝင်ပါတယ်။
သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာလည်း အမျိုးမျိုးဖိနိပ်ခံရပြီး တိုင်းပြည်ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အထိ ဆုံးရူံးခဲ့ကြပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဂျူးလူမျိုးကို ကမ္ဘာမှာ ဥာဏ်ပညာအကောင်းဆုံးလူမျိုးလို့ သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ ၂၀၁၅ခုနှစ် ကမ္ဘာတခွင်မှာ ဂျူးလူမျိုး လူဦးရေ ၁၄.၂ သန်းရှိပါတယ်။ ကမ္ဘာ့လူဦးရေရဲ့ ၀.၂%ရှိတဲ့ ဂျူးလူမျိုးဟာ....
ဂျူးလူမျိုးများဟာ ၂၀ ရာစုအတွင်း နိူဘယ်ဆုရှင်များရဲ့ ငါးပုံတစ်ပုံ ၊
အမေရိကန်နိုင်ငံ သြဇာအရှိဆုံးသူများစာရင်းထဲက ၅၀% ၊
အမေရိကန် နာမည်အကြီးဆုံးသော ပါမောက္ခတွေထဲမှာ ၃၀% ၊
ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံး လုပ်ငန်းရှင်များ စာရင်းထဲမှာ ၅၀%၊
Forbes စာရင်းအရ ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံးသော ပုဂ္ဂိုလ် ၄၀ ထဲမှာ ဂျူးလူမျိုးက ၁၈ ဦး တို့ဟာ ဂျူးလူမျိုးဖြစ်ကြသလို၊ သမိုင်းမှာ အလွန်ကျော်ကြားကြတဲ့ အိုင်စတိုင်း၊ ကားလ်မတ်စ်၊ တာအိုဝင် စသည်တို့ဟာ ဂျူးလူမျိုးဖြစ်ကြပါတယ်။
သုတေသနအရ ဒီလိုအောင်မြင်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းအားလုံးထဲမှာ ဂျူးလူမျိုးတို့ရဲ့ မိသားစုနီတိနဲ့ ကလေးပြုစုပျိုးထောင်တဲ့နည်းလမ်းများဟာ အဓိကကျတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ သူတို့ဘာတွေကို တန်ဖိုးထားလို့ ကလေးများကို ဘယ်လိုသင်ကြားပျိုးထောင်ကြပါသလဲ။
ကောင်းမွန်တဲ့ ကလေးပညာရေးဟာ တိုးတက်မူ အားလုံး ၊ ကောင်းကျိုးအားလုံးရဲ့ အခြေခံဖြစ်တယ်လို့ ဂျူးတို့က ယုံကြည်ပါတယ်။ ကလေးတွေရဲ့ လွတ်လပ်တဲ့တွေးခေါ်မူနဲ့ ကိုယ့်ကိုကို ရပ်တည်နိုင်မှု၊ မိမိကိုယ်ကို အားကိုးတတ်မှုကို အလေးထား ပျိုးထောင်ပါတယ်။ ကလေးကို အချစ်လွန်ကဲတာမျိုး၊ ပိုးမွေးသလို မွေးတာမျိုးကို လုံးဝဆန့်ကျင်တယ်။ သူတို့စကားပုံတစ်ခုက ဒီလိုဆိုပါတယ်။ “ ၅ နှစ်ကလေးဟာ သင့်ရဲ့ အရှင်သခင်၊ ၁၀ နှစ်ကလေးဟာ သင့်ရဲ့ကျွန်၊ ၁၅ နှစ်ကလေးဟာ အဖေနဲ့တန်းတူဖြစ်သွားပြီ” တဲ့။ ဆိုလိုတာက ၅ နှစ်ကလေးဆိုရင် အတတ်နိုင်ဆုံး ချစ်မယ်။ ပျိုးထောင်မယ်။ ၁၀ ကျရင် သူနိုင်တဲ့ဝန်ကို ထမ်းခိုင်းမယ်။ မိဘများက သူနိုင်သမျှ အချိန်ရရင်ရသလို ခိုင်းရမယ်။ ၁၅ နှစ်ကျရင် ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်တတ်စေရမယ်။
၂ ။ စာအုပ်ချစ်တဲ့ဓလေ့
ကလေးများသိတတ်ခါစအရွယ်မှာပဲ ဂျူးမိသားစုများဟာ ပျားရည်တစ်စက် တို့ထားတဲ့ ကျမ်းစာအုပ်ကို ကလေးအားနမ်းရှုံ့စေပါတယ်။ ဆိုလိုရင်းကတော့ စာအုပ်ဟာ အလွန်ချိုမြိန်ကြောင်း၊ နှစ်သက်စရာ အလွန်ကောင်းကြောင်း သိစေတဲ့ သဘောပါ။ ဂျူးမိသားစုတိုင်းလိုလို စာအုပ်စင်ထားရှိပြီး စာအုပ်စင်များကို ခေါင်းအုံးဘက်မှာ ထားရပါတယ်။ စာအုပ်ဆိုတာ ချစ်ရုံတင်နဲ့ မပြီးဘဲ လေးစားရတဲ့သဘောပါရှိပါတယ်။ သူတို့ကိုသူတို့လည်း စာအုပ်ချစ်တဲ့လူမျိုးလို့ တင်စားကြတယ်။ သုတေသန စာတမ်းအရ အသက် ၁၄ နှစ်အထက် ဂျူးကလေးများဟာ တစ်လအနည်းဆုံး စာအုပ်တစ်အုပ်ဖတ်ပြီးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ဂျူးမိသားစုထဲမှာ ကလေးများနည်းနည်းအသိရှိလာပြီဆိုရင် မိခင်ဖြစ်သူက ဒီလိုမေးမြန်းလေ့ရှိတယ်။ “တကယ်လို့ သားရဲ့အိမ်က မီးလောင်သွားတယ်၊ ပစ္စည်းတွေလည်း ဘာမှမကျန်အောင် အလုခံရတယ်။ သားဘာကိုယူပြီးထွက်ပြေးမလဲ” တဲ့ ၊ ကလေးက ရွှေတို့ ၊ ငွေတို့ ဖြေဆိုရင် မိခင်က ပြန်စဉ်းစားအုံး၊ အဲဒီပစ္စည်းဟာ အရောင်မရှိဘူး၊ အနံ့အရသာလည်း မရှိဘူးလို့ ပြန်ပြောလေ့ရှိပါတယ်။ သားက “ ဥာဏ်ပညာ” လို့ ဖြေဆိုနိုင်တဲ့ အထိ မိခင်က တစ်ဖြည်းဖြည်း လမ်းကြောင်းပေးပါတယ်။ ကျနော်တို့ ဆီက ပညာရွှေအိုး လူမခိုး နဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်တူပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်တို့က ကလေးတွေ သူဘာသာသူသိစေတာမျိုးမဟုတ်ပဲ မိဘနဲ့ဆရာများက တိုက်ရိုက်ပြောပြတာများနေပါတယ်။
၄။ စာအုပ်အများကြီးကို ၀န်တင်ထားတဲ့ “လား” မဖြစ်ပါစေနဲ့
စာတအားဖတ်တော့ ဒီစကားပုံ ပေါ်ပေါက်လာတယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။ ကလေးများကို ငယ်ငယ်ကတဲက စာဖတ်အောင် သွန်သင်ပေးကြတယ်။ ပြီးရင် စဉ်းစား တတ်အောင် ပျိုးထောင်ပေးကြပါတယ်။ သူတို့အယူအဆအရ ဖတ်မှတ်လေ့လာခြင်းဟာ အတုခိုးခြင်းတစ်မျိုးသာဖြစ်ပြီး စဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်ခြင်း၊ ကိုယ်ပိုင်အမြင်ရှိခြင်းနဲ့ အသစ်ဖန်တီးတတ်ခြင်းသည်သာ အဓိကကျတယ်လို့ ယူဆပါတယ် ။ ဗဟုသုတ ကြွယ်ဝပြီး ဘာမှမလုပ်တတ်တဲ့သူကို စာအုပ်ကိုဝန်တင်ထားတဲ့ “ လား” လို့ စကားပုံနဲ့ ခိုင်းနှိုင်းထားပါတယ်။
ဒါလည်းသူတို့ရဲ့ နာမည်ကြီးစကားပုံပါ။ မိဘစကား၊ ဆရာစကားအပါအ၀င် ဘယ်သူပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ် သံသယ အရင်ဝင်ခိုင်းပါတယ်။ သံသယ၀င်မှပဲ အဖြေမှန်ထွက်တဲ့သဘောပါ။ ကျနော်တို့ဆီက ပြောတဲ့အတိုင်း နာခံမှ လိမ္မာမယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆနဲ့ ကွဲလွဲပါတယ်။
မိဘများ အထောက်အကူ ဖြစ်ဖို့ တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ နှစ်သက်နိုင်ကြပါစေ။
;Sayar Aung Ko Latt
အမေဇုန်မြစ်ဟာ တောင်အမေရိကတိုက်မှာ တည်ရှိပါတယ်။ ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံမှ စတင်ပြီး နိုင်ငံပေါင်းများစွာကို ဖြတ်သန်းကာ အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာထဲသို့ စီးဝင်သွားပါတယ်။
ဂါရာနာ ၊ အီကွေဒေါ ၊ ဗင်နီဇွဲလား ၊ ဘိုလီးဗီးယား ၊ ဘရာဇီး ၊ ကိုလံဘီယာ နဲ့ ပီရူး နိုင်ငံတွေကို ဖြတ်သန်းစီးဆင်းပါတယ်။
၂၀၀၇ ခုနှစ် ဘရာဇီးသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့ တိုင်းတာမှုအရ အမေဇုန်ဟာ နိုင်းမြစ်ထက် ၆၅ မိုင် ပိုရှည်ကြောင်းသိခဲ့ရပြီး wiki မှာ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ အများစုကတော့ နိုင်းမြစ်သာ အရှည်ဆုံးလို့ လက်ခံနေကြဆဲပါ။
အမေဇုန်မြစ် ဟာ Ucayali-Apurímac မြစ်များမှ မြစ်ဖျားခံလာတဲ့မြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ စွတ်စိုတဲ့ရာသီတွေမှာ အမေဇုန်မြစ်ရဲ့ အကျယ်ဆုံးနေရာဟာ မိုင်ပေါင်း ၁၂၀ ခန့် ရှိနိုင်ပါတယ်။
အမေဇုန်မြစ်ကို ဖြတ်ပြီးဖောက်ထားတဲ့ တံတားမရှိပါဘူး။ အကြောင်းကတော့ အမေဇုန်မြစ်ပိုင်း အများစုဟာ လမ်းတွေ မြို့တွေနဲ့ မနီးစပ်ပဲ မိုးသစ်တောတွေထဲမှာပဲ ရှိနေလို့ဖြစ်ပါတယ်။
အမေဇုန်မြစ်ကြောင်း တစ်လျှောက် အကြီးဆုံးမြို့ဟာ ဘရာဇီးက Manaus မြို့ဖြစ်ပြီး လူဦးရေ ၁.၇သန်း ၀န်းကျင်ခန့်ရှိပါတယ်။
ကွဲပြားခြားနားတဲ့ မျိုးစိတ်ပေါင်း ၅၀၀၀ ကျော်ဟာ အမေဇုန်မြစ်ထဲမှာ ရှင်သန်နေပါတယ်။
ဆိတ်လို တိရစ္ဆာန်လေးတွေကို အကောင်လိုက်မြိုနိုင်တဲ့ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးမြွေအမျိုးအစား အန်နာကွန်ဒါမြွေကြီးတွေဟာလည်း ဒီမြစ်ထဲမှာပဲ တွေ့ရလေ့ရှိပါတယ်။ ပန်းရောင်လင်းပိုင်တွေလည်း ဒီမြစ်ထဲမှာ တွေ့ရတတ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာပေါ်က စုစုပေါင်း ရေချိုရဲ့ ၂၀% ကို အမေဇုန်မြစ်က ထောက်ပံ့ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ရေထုထည်အများဆုံးမြစ်ဖြစ်ပြီး စက္ကန့်တိုင်းတွင် ရေကုဗမီတာ ၂သိန်းကျော်ကို ထုတ်လွှတ်ပေးပါတယ်။
ကမ္ဘာက အမေဇုန် ဟု သိထားသော်လည်း ဘရာဇီးတွင် Solimões လို့ လူသိများပါတယ်။
အမျိုးသားများသည် ဆေးရုံသို့လာပြီး သုက်ပိုးများကိုစစ်ဆေးရာ၌ ရှက်ခြင်း၊ ကြောက်ခြင်း၊ စိတ်ပျက်ခြင်းများ ဖြစ်တတ်သည့်အတွက် အိမ်သုံးစမ်းသပ်ပစ္စည်းတစ်ခုအဖြစ် တီထွင်ခဲ့ရကြောင်း ဒေါက်တာ ဟာဒီက ပြောကြားသည်။
ချင်အင်ပါယာက တာရာကိုတာ စစ်သည်တော်များ
ဒီလိုအံမခန်းတဲ့ စစ်သည်တော်တွေဟာ တရုတ်နိုင်ငံ ရှီအန်းမြို့မှာရှိတဲ့ ပထမဆုံးတရုတ်အင်ပါယာရဲ့ ချင်ဧကရာဇ် Qin Shi Huang ရဲ့ ဂူသင်္ချိုင်းမှာရှိပါတယ်။
ချင်မင်းဆက်ရဲ့ အင်အားကြီးမားပုံကိုဖော်ပြတဲ့အနေနဲ့ Terracotta Army တွေကို ရွံ့တွေနဲ့စီမံဖန်တီးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ စစ်သည်များ ၊ သူရဲကောင်းများ ၊ စစ်တပ်ဖွဲ့စည်းပုံ ၊ စစ်ယာဉ်များ အစရှိတာတွေကို ဖန်တီးထားခဲ့တာပါ။ ဒီလိုဖန်တီးရာမှာ အလုပ်သမားပေါင်း ၇သိန်းကျော်ကို သုံးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဧကရာဇ်သေဆုံးတဲ့အခါ အရုပ်တွေကိုပါ တစ်ပါတည်းမြုပ်နှံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၇၄ခုနှစ်ဝန်းကျင် ချင်ဧကရာဇ်ရဲ့ ဂူဗိမာန်အနီးမှာ ရေတွင်းတူးရာကနေ ဒီရုပ်တုတွေကို ပြန်လည်တူးဖော်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဘီစီ ၂၀၀ ၀န်းကျင် ချင်မင်းဆက်လက်ထက်က ၀တ်စားဆင်ယင်ပုံတွေကို ဒီရုပ်တုတွေမှာမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၈၇ခုနှစ်မှာ UNESCO မှာ ကမ္ဘာယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာတော့ တူးဖော်ရရှိတဲ့နေရာမှာပဲ ပြတိုက်အဖြစ်ဖွင့်လှစ်ထားရှိပါတယ်။ ဒီနေရာကိုရောက်ရင် စစ်သားရုပ်တုပေါင်း ၈၀၀၀ကျော် ၊ မြင်းစစ်သည်ပေါင်း ၅၂၀ကျော် နဲ့ မြင်းရထားပေါင်း ၁၅၀ ကိုတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီမိုကရေစီ (Democracy) သည် ခေတ်သစ်နိုင်ငံရေး အယူအဆများအနက် တန်ဖိုးအထားခံရဆုံးဖြစ်သည်။ ဒီမိုကရေစီ ဟူသောစကားရပ်မှာ ရှေးဟောင်းဂရိစကားလုံး de...
မိုက်ခရိုဆော့ဖ်ပိုင်ရှင် ဘီလ်ဂိတ်ကိုတော့ လူတိုင်းသိမှာပါ။ သူဟာ ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံးစာရင်းမှာ အမြဲ ထိပ်ပိုင်းမှာ နေရာယူနေတဲ့သူပေါ့။ ၁၉၅၅၊ အောက...
ခြင်းလုံးကစားနည်းသည် မြန်မာ့ရိုးရာတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး အထူးစိတ်ဝင်စားဖွယ် ရှားပါးကစားနည်းဖြစ်သည်။ ညင်သာသည့် ခြေခတ်ပညာမျိုးစုံဖြင့် ကြွယ်ဝလှသည့် ...
ဝိတ် လျှော့ချနည်းလမ်း အမှားများ
ရိုးစင်းတဲ့ ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ချ နည်းတွေဟာ နည်းလမ်းမမှန်ရင် လက်ရှိ ကိုယ်အလေးချိန်ကိုတောင်မှ ပိုများလာ နိုင်ပါတယ်။ (၁) ရက်တို အစာလျှော...
ရဟန်းတော်များအဖို့ အစားအစာကို ဘုဉ်းပေးသုံးဆောင်တဲ့နေရာမှာ အစားအစာအတိုင်းအတာကိုရော၊ ကိုယ့်ဝမ်းအတိုင်းအတာကိုရော သိရှိပြီးသကာလ ဘုဉ်းပေးသုံးဆေ...
အသစ်တွေ့ရှိရသော တွဲမစားသင့်တဲ့ အစားအစာ ၂ မျိုး
ဒီပို့စ်လေးက Facebook မှာ Share ထားလို့ အားလုံးလဲပိုပြီး သိရအောင် ပြန်လည်ဝေမျှလိုက်တာပါ။ သေချာတော့မသိပေမယ့် ဆင်ခြင်လို့ရတာပေါ့ဗျာ။ ထိုင်ဝမ်...
ကောသလမင်းအိမ်မက် ၁၆ ချက် သရုပ်ဖော်ပုံများ